Lohahevitra mahaliana 55 horesahina amin'ny namana, mpiara-miasa na fianakaviana - Blog
Lohahevitra mahaliana 55 horesahina amin'ny namana, mpiara-miasa na fianakaviana
Ka lasa somary lany andro ny resaka nataonao.
Nanjary… mankaleo ny miresaka amin'ny namana na olon-tiana!
Tsy mila izany.
Betsaka ny zavatra mahaliana azo resahina.
Lohahevitra maro azo isafidianana.
Aiza no hanombohantsika?
Maniry mafy an'io daholo isika, fa inona no tena fantatsika momba ny fitiavana?
ny fomba hiatrehana olona tsy hamela anao
Be dia be ny sehatra azo resahina amin'ny resaka mahaliana eto - zavatra maro horesahina amin'ny namanao na koa amin'ny vadinao.
iray. Miankina amin'ny hafa ve ny fitiavana?
roa. Ny fitiavana ve dia valin'ny biokimika fotsiny amin'ny setroka manaitaitra manokana?
3. Safidy sa fahatsapana ny fitiavana?
Efatra. Moa ve ny fitiavana mandresy ny rehetra sa io fiheverana io fotsiny no fiheverana an'ireo orinasan-tsoratry ny karatra firariana?
5. Moa ve isika tia olona noho ny maha-izy azy, na na eo aza ny maha izy azy?
6. Manintona tokoa ny mifanohitra amin'izany?
7. Tokony hiova ho an'ny olona tianao ve ianao?
8. Azonao atao ve ny mitia olon-tiana mihoatra ny iray miaraka?
9. Maharitra hafiriana vao mifankatia?
10. Fa maninona no atao ambanin-javatra ny hatsarana?
iraika ambin'ny folo. Misy karazam-biby hafa ao amin'ny fanjakan'ny biby ve miaina fitiavana toa antsika olombelona?
12. Misy ve ny atao hoe mpiray fanahy sa fanahy mpihavana ?
13. Inona ny zavatra mahatsiravina indrindra vitanao tamin'ny fitiavana?
Ny filozofa sy ny poeta dia nandinika an-davitra ireo zavatra ireo…
… Azo inoana fa nanao fandrosoana tsara kokoa isika tamin'ny valim-panontaniana raha vondrona namana maro no nametraka ny fanontaniana fa tsy.
Rehefa miresaka tontolo anaty isika dia zavatra vitsivitsy no mety hahagaga toy ny fanaparitahana ny 'Whys' sy 'Hows' ary 'Who' ary 'Whats' amin'ny fiainantsika andavanandro.
Ny psikolojia dia lohahevitra goavana sy mahaliana be miaraka amin'ny zavatra maro horesahina. Andramo ireto raha ny habeny:
iray. Toetran'ny fitaizana - iza no manana ny anjara toerana lehibe anananao?
roa. Fa maninona ny olona sasany mankafy zavatra tena tsy tianao?
3. Tanjona farany ve ny fahasambarana sa vokatra vitan'ny zavatra hafa fotsiny?
Efatra. Nahoana isika no mahatadidy zavatra mazava tsara ary manadino zavatra hafa tanteraka?
5. Inona no tadidinao tsara indrindra hatramin'ny fahazazanao?
6. Iza amin'ireo ray aman-dreninao no tianao indrindra amin'ny lafiny toetrany?
7. Inona no atahoranao indrindra?
8. Inona avy ireo kileman-toetranao 3 lehibe indrindra?
9. Inona ianao indrindra reharehan'ny ? Fa maninona
10. Firy isan-jaton'ny fanapahan-kevitrao araka ny hevitrao no raisinao avy tsy mahatsiaro tena na tsy mahatsiaro tena ary firy isan-jaton'ny sainao?
iraika ambin'ny folo. Mieritreritra ve ianao fa mandray fanapahan-kevitra tsara amin'ny ankapobeny?
12. METY bebe kokoa ve ianao rehefa irery na miaraka amin'ny hafa?
13. Rehefa misy manontany antsika hoe manao ahoana isika, maninona no mamaly amin'ny 'tsara' isika nefa tena tsy salama?
14. Firy taona no tsapanao ao an-tsainao?
dimy ambin'ny folo. Maninona ny sainao no misakana anao tsy hanao zavatra mety tianao?
16. Optimista ve ianao sa pessimist? Inona no antony anaovanao izany?
Ho an'ny sasany amin'ireto fanontaniana ireto dia mety hanokatra ny mason'ilay olona ny hamaly anao. Andramo dia zahao.
Ny sasany amin'ireo lohahevitra sarotra indrindra amin'ny resadresaka dia eo ambanin'ny lohateny hoe metafizika.
Avy amin'ny teny grika izay adika ara-bakiteny hoe 'mihoatra ny natiora', ny metafizika dia miresaka momba ny karazana fanontaniana momba ny maha-olona sy ny fotoana ary ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fanovana. Betsaka ny horesahina amin'izay!
Andramo ireto lohahevitra ireto amin'ny habe:
iray. Ianao ve ilay olona nitovizanao omaly?
roa. Amin'ny firy izao? Voakasik'izany ve isika sa ny fahatsiarovan-tena no mamorona azy?
3. Misy ve ny atao hoe fanahy?
Efatra. Misy zavatra hafa ve ho antsika mihoatra ny vatantsika maty ?
5. Azontsika atao ve ny maminavina mialoha ny ho avy? Sa ny 'fihetsika mahatsiravina' an'ny tontolo kuantum, araka ny filazan'i Einstein azy, dia midika fa tsy azo vinavinaina ho voajanahary ny zavatra?
6. Misy ve ny zava-misy tsy manam-petra mihoatra ny an'ny tenantsika izay andraisana fanapahan-kevitra mety sy lalana tsirairay amin'ilay lalana nolalovana?
7. Fa maninona no misy fa tsy misy?
Miomàna hampitsoka ny sainao.
oviana i john cena no nisotro ronono
40 Fanontaniana mampieritreritra eritreritrao mandritra ny andro maro
Ahoana ny hiadian-kevitra amin'ny lohahevitra lalina sy sarotra nefa tsy lasa ady hevitra mafana
Fanontaniana lalina 9 hanimba ny ati-dohanao (amin'ny fomba tsara)
15 Toetoetran'ny olona malala saina
Ny ampahany lehibe amin'ny psikolojia - ary ny iray izay mendrika ny fizarana misy azy - dia ireo finoana izay hazonintsika fatratra.
Anisan'izany ireo lohahevitra toy ny fivavahana, ny fomba fijery politika, ny finoana lojika, ary izay zavatra rehetra mitaky anao hanana finoana.
iray. Fa maninona ianao no mino ny zavatra inoanao fa marina?
roa. Tokony hikarakara ny fiainantsika manokana ve isika, sa tokony hifampikarakara daholo?
3. Mino ve ianao fa tsara voajanahary ny olombelona?
Efatra. Efa niova hevitra ve ianao ary mijanona tsy hino zavatra iray izay nino mafy taloha? Fa maninona
5. Mino ve ianao fa misy fiainana manan-tsaina ankoatr'ity planeta ity?
6. Moa ve manana fitenenana be loatra na kely loatra amin'ny fomba fiainantsika ny governemanta?
7. Misy fetra amin'ny fahalalahana miteny ve sa misy mahazo avela hiteny amin'izay tiany?
8. Ahoana ny fomba hiatrehanao ny fampahalalana na porofo mifanohitra amin'ny zavatra inoanao?
9. Ohatrinona ny fampahalalana ilainao alohan'ny hinoanao zavatra lazain'ny olona iray? Miankina amin'ny fahatokisanao an'io olona io ve sa ny fahaizanao mana-tsaina azy?
10. Misy ve izany ny fahamarinana?
iraika ambin'ny folo. Fa maninona ny fivavahana no mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona maro be?
12. Ny fivavahana tsy mino an'Andriamanitra ve dia endrika fivavahana?
Rehefa miresaka ireo karazana lohahevitra ireo dia tsara ho fantatra izany ny fomba hiadiana hevitra amin'ny fomba mahasalama toy izay hamela azy hidina amin'ny ady hevitra.
Moraly sy etika
Inona no mety ary inona no tsy mety? Tsara sa ratsy? Ekena ara-moraly sa mahatezitra? Ankehitriny ireo dia zavatra lalina sy mahaliana azo resahina amin'ny namana.
Betsaka ny tranga tokony hodinihina, saingy ireto misy vitsivitsy hanombohana anao.
iray. Fa maninona no mora loatra ny tsy mahita ny fijaliana marobe eto an-tany?
roa. Tokony hanana zo hamarana ny fiainantsika manokana ve isika?
3. Ny ray aman-dreny roa dia manapa-kevitra ny hitaiza ny zanany lahy amin'ny maha-zazavavy azy (na ny mifamadika amin'izany) - tokony havela izy ireo raha hiteraka olana amin'ny momba ny zaza rehefa lehibe izy ireo?
Efatra. Raha azo antoka fa hampihena 30% ny asan-dahalo mahery vaika, tokony hanome santionany ADN ve ny polisy? Ahoana raha 80% izany?
5. Moa ve ny manao sorona ny ain'ny olona tsy manan-tsiny fotsiny mba hamonjy ny ain'ny olona tsy manan-tsiny 5? Ahoana raha mamonjy ain'olona 100 ny fakana aina iray? Ho mora kokoa ve ny fanapahan-kevitra raha mpamono olona voaheloka ilay olona hatao sorona? Vonona ny hanao sorona olon-dehibe ve ianao mihoatra ny hanaovanao sorona zaza? Hahafoy ny ainao ve ianao?
6. Raha fantatrao fa ny dadanao dia mamitaka ny reninao (na ny mifamadika amin'izany), azonao atao ve ny miteny amin'ny reninao fa hahafaty azy mandritra ny androm-piainany izany, na hangina ianao raha nampanantena ny rainao fa tsy hanao izany intsony izy ?
7. Mety ve ny manao andrana amin'ny biby raha toa ka manavotra ny ain'ny olombelona izany? Misy dikany ve ny karazana biby?
Rehefa miresaka amin'ny namanao na olom-pantatrao ianao dia afaka miresaka momba ny zavatra mahazatra toy ny asa sy ny fahitalavitra ary ny vaovao, na afaka milentika zavatra lalina kokoa ianao.
Ny lohahevitra sy ny fanontaniana etsy ambony dia ny lavaky ny bitro azo atao - raha vantany vao midina iray ianao dia tsy maintsy ihodivirana mankany amin'ny iray hafa sy iray hafa izany.
Mandrosoa ihany, andramo ny iray ho an'ny habeny ary jereo hoe aiza no itondran'ny resaka anao.
dragona baolina z vanim-potoana vaovao
ny fomba handao ny fifandraisana maharitra
ajanony ny milaza fa izany no izy
rahoviana i ronda rousey no miady manaraka
ny olon-tiana tsy manokana fotoana ho ahy